Chiedza cheMontaigne Sports Education Thoughts to School Sports
1 Montaigne akafunga nezvekudzidzisa
Panyaya yezvedzidzo, Montaigne akaratidza zvakajeka kuti chinangwa chekudzidzisa ndechokudziridza "vanyoro" panzvimbo yekubudisa "kudzidzisa." Kwete kufunga mupfungwa izere ruzivo, pakutonga hazvina hanya nemagariro uye unhu [N}, regai wongorega ndangariro vakazadzwa kudzidza, kunzwisisa uye rinobvumira kunyorwa kuziva. n) Maziviro aMontaigne ekudzidzisa ndeyekudziridza vanhu vanoshandisa zvavakadzidza, pane "ruzivo" rusina maturo. Ndakadzidza kwete chouviri, kwete kuti kukurukura kunze nyika, uye zvakakoshesa, zvinodiwa zvavo, mwoyo wakazara, kuvandudza dzidzo, kuva munhu anokwanisa munhu, kwete munhu akadzidza.
Montaigne anonyanya kukoshesa basa revadzidzisi Kubudirira kana kukundikana kwekudzidzisa vana kunoenderana zvachose nekusarudzwa kwevadzidzisi Basa reVadzidzisi rinosanganisira mamwe akawanda anokosha.
Vadzidzisi vanofanira kutanga kunzwisisa vadzidzi, "saka kuti vadzidzi pamberi trot, kusarudza kwake kumhanya, uye ipapo kusarudza sei kuti varidzi regulator kuchinja vadzidzi 'simba, ndiyo yakanaka nzira." Chechipiri, tinofanira munhu mumwechete somudzidzisi pahwaro kunzwisisa vadzidzi pamusoro kana yunifomu Kudzidzisa kwakaoma kukudziridza tarenda. Saka akashora nzira iyi, pasinei mudzidzi unyanzvi uye chokupika zvakasiyana, dzose rakabatana bhuku kudzidzisa mitemo, saka muboka hombe vana vanogona chete kukudziridza-maviri zvitatu zvakabatsira, zviri kukwana Strange.
2 Montaigne's education education ideas
Mbuya kunyanya kukoshesa basa mutambo mune dzidzo, dzidzo nevaPezhiya vanotaurwa Xenophon, tinovaona tsika inoita vana kungofanana nevamwe vanhu kuva mabhuku evana, Plato akati mwanakomana wavo mukuru ndiye mugari wenhaka pachigaro dzidzo yakadaro. Upenyu hwaPrince Edward hwakanga husina kupiwa kuvakadzi asi kune vakachekwa vairemekedzwa namambo. Muchekwa wacho aive nebasa rokudzidzira.Aiva nemudziri wemadzimai uye akamudzidzisa akatasva nekuvhima pazera remakore manomwe. Vana vanofanirwa kukurudzirwa kuva munhu anogadzikana uye ane utano, kureva, muviri nemafungiro.